Squall, kedu ka esi hibe ya na kedị ihe bụ nsonazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ebe a na-ahụkarị gbasara ihu igwe, anyị na-ahụkarị ihe ga-eme ka anyị mehie. Otu n'ime echiche ndị a bụ nke ịsa ahụ. Anyị na-ejikọta ya na oke mmiri ozuzo na njirimara ụfọdụ. Gbanyụọ mmiri ozuzo na oke mmiri ozuzo, na oke mmiri, wdg. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'okwu a na-ekwu kwa ụbọchị.
Nke ahụ bụ ihe isiokwu a bụ maka. N'ebe a, anyị ga-edozi obi abụọ banyere ihe ịsa ahụ na ihe bụ isi njirimara ya.
2 Esemokwu dị iche na ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ
3 Squall akụrụngwa
4 Mee ka mmiri saa mbara n'ụwa niile
O bu okwu puru iju ihe eji eme ya. O yiri ka ọ na-ahụkarị asụsụ nkịtị ma ọ bụ ụdị okwu asụsụ nke asụsụ. Otú ọ dị, chubasco bụ okwu Spanish nke gọọmentị. O sitere n’asụsụ Portuguese «chuva» nke pụtara mmiri ozuzo. Ya mere, anyi nwere ike ikwu na igwe mmiri bu mmiri ozuzo nke njirimara ya di iche.
Okwu a mụrụ ka enwe ike ịkọwa etu mmiri si ezo ma ọ bụ etu mmiri si ezo. Ọ bụ ihe dị ka ihe a ga-akpọ ịsa ahụ. A na-ejikarị ya akọwa ọnọdụ ihu igwe mmiri na-ezo nke ha na-ada nke ukwuu mana obere oge. Dị ka ọ na-adịkarị, mmiri ozuzo a bụ n'ihi nhazi ihu ma ọ bụ enweghị nsogbu ikuku. Emekarị nwere ụfọdụ nsogbu metụtara iru mmiri na nnukwu nsogbu na gburugburu ebe obibi
Esemokwu dị iche na ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ
Ihe dị iche iche dị na ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ agbatịkwuru bụ na ịsa ahụ na-apụtakarị na mberede. Ọ dị mgbagwoju anya maka ndị na-amụ gbasara ihu igwe ịkọwa mgbe mmiri ga-asa. Mmiri ozuzo bụ ihe a na-atụghị anya ya na, ọtụtụ oge, ọ na-adaba ajọ lita lita kwa square mita, ma ọ na-agwụ na a okwu nke nkeji. Nke a bụ ihe na - eme ka o siere rada ike ịchọpụta ya.
Nwere ike ịchọpụta ma ọ bụ obere chọpụta ụkpụrụ nke nwere ike iduga na mmiri ozuzo, mana ọ naghị adịkarị mma. N'ihi nke a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịkpọsa na akụkọ ihu igwe na a ga-enwe mmiri ozuzo na-enweghị ha n'ezie. Typedị mmiri ozuzo a na-eme ihe ike ike ma tinye nnukwu mmiri n'ime obere oge. N'ihi nke a, n'okporo ámá na-agba mmiri ngwa ngwa ma nwee ike ịkpata ọdachi nye ụmụ mmadụ.
Nsonaazụ izizi bụ mbibi ma ọ bụ idei mmiri nke ebe ndọba ụgbọala na okpuru ulo. Ọ bụrụ na nkwụsị ma ọ bụ mkpọda nke ebe ebe mmiri na-ada dị elu, ọ ga-ekwe omume na ọ nwere ike ịdọrọ ụgbọ ma ọ bụ kwatuo mgbidi ochie. Anyị kwesịrị iburu n'uche na, ọbụlagodi na ọ bụ obere mmiri ozuzo n'oge, ike na ogo mmiri na-ada dị oke elu. Nke a bụ ihe na-eweta nsogbu kacha dị egwu.
Mmiri ozuzo nwere ike ịgbatị ruo ọtụtụ awa nke na-agaghị adị ize ndụ ma ọ bụrụhaala na ọ dabaghị. Dị nnọọ, nke kacha mma ọdịda bụ otu nke na-adịte aka ma na-enweghị oke ike, nke mere na ọ nwere ike ijupụta aquifers ma zoo ala na-enweghị emerụ ihe ọkụkụ ma ọ bụ osisi.
Anyị ga-enyocha njirimara na akụrụngwa nke igwe mmiri. Ka anyị na-aga Ecuador, mmiri na-arịwanye elu ma na-arịwanye elu Nke a ga-eme, dịka anyị kwuburu na mbụ, n'ihi na ha bụ ọnọdụ ihu igwe metụtara jikọtara ihu igwe na ihu igwe dị jụụ. Na ala anyị anyị na-enwe obi ụtọ ihu igwe nwere oke okpomọkụ na ụfọdụ nkwarụ nke na-akpata ọdịdị nke ihe ndị a.
Otu n'ime ụzọ ịkọ amụma na igwe mmiri ga-abịa bụ mgbe anyị hụrụ n'igwe ojii ojii dị oke oji, ikuku na-ebido dị ike nke ukwuu na ọbụnadị igwe ojii nwere ike ịda. Ọ bụ n'ọnọdụ ndị a ebe a ga-amalite inwe nsogbu ikuku dị elu nke ga-eduga na ịsa ahụ. Na ọnọdụ a, ọ ka mma ịnọ na nchekwa, n'ihi na ọ na-esokarị ebili mmiri eletrik.
Mgbe naanị nkeji ole na ole, elu-igwe na-apụta ìhè karịa ma na anyanwụ na-awa. Ọnọdụ okpomọkụ na-adịkarị ụtọ karị mgbe ọdịda nke ọ na-ata ahụhụ na mbata nke ihe ahụ. Ihe ndị a niile na-eme ka ịsa ahụ dị mfe ịmata. Karịsịa, ọ bụrụ na anyị maara mpaghara ebe ha na-emekarị, ọ dị mfe ịkọ ogologo oge ọ ga-adịru na oge ole anyị ga-achọta ya. N’ebe ugwu dịkarịsịrị ala, ugboro ole ihe a na-eme na-arịkwa elu.
Ihe niile dị n'elu na-egosi nke ahụ enweghi nsogbu na abawanye na uwa dum.
Mee ka mmiri saa mbara n'ụwa niile
Ikuku akwusighi na-esonyere elu okpomọkụ, a bit ọzọ iru mmiri. Mgbanwe ihu igwe nke na-eme na ọkwa ụwa na-abawanye ogo okpomọkụ nke ụwa. Ya mere, enwere ike ịsị na ọ pụtara mmụba nke ebe ogbe mmiri n'ime ime mkpara. Nke a nwere ike ịtụgharị bụrụ mmụba enwere ike na mpaghara ebe enwere ike ịsa ahụ nwere njirimara dị ka nke Equator.
Nke a bụ ihe kpatara na, na Spen, ọnụnọ nke ndapụta ndị a nke obere ma dị egwu mmiri ozuzo na-eto. Dika okpomoku na iru mmiri, otua ka nsogbu adakpọ nke ikuku di. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na, dị ka e nwere ndị ọzọ "ebe okpomọkụ" ebe ohere maka enweghi nsogbu ikuku, ga-ebute mmụba na mmiri.
Nke a bụ otu ihe mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-eweta. Ọ bụghị naanị na oge nke ihe ịtụnanya ndị a ga-abawanye na mpaghara ndị a na-ahụta ọnọdụ ugwu dị jụụ, mana ike ha ga-abawanye. Ike dị elu karị nwere ike ibute mmebi ọzọ na ihe egwu karịa. Na nke a, anyị na-agbakwunye na mmiri na-esiri ike ịkọ, yabụ naanị ihe anyị nwere ike ime, bụ iji gbanwee usoro nke ịhazi obodo nke mere na ọ nwere ike buru ụzọ mee maka ihe ngosi mmiri.
Ọzọ ihe anyị nwere ike ime bụ mma anyị amụma usoro maka ndị a phenomena nke mere na anyị nwere ike na-atụ anya na ọ dịghị onye na "jidere na nche" site ndị a ufiop ihe.
Enwere m olileanya na site na ozi a doro anya ihe ịsa ahụ bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ịsa ahụ